रोचकसंसार Archives - सेतो गुरास
जहाँ अनौठो चलन गाईको दुधमा ब्रा लगाईदिईन्छ
सुन्दैमा अनौठो लाग्दछ । तर बेलायतमा चाहिँ किसानले आफ्नो फार्ममा पालेका गाईहरुलाई कल्चौडोमा ब्रा लगाइदिने गरेका छन् । स्कटल्याण्डको हाइल्याण्डस्ति इस्टर रोसका एक किसान दम्पत्तिले आफ्ना गाईलाई ब्रा लगाइदिएका हुन् । थुन सुन्निने समस्या अर्थात् मास्टिटिसबाट गाईलाई मुक्ति दिनका लागि यसो गरिएको बताइएको छ....
न्यूजिल्याण्डमा सयौ ह्‍वेलले आत्महत्या गरेपछि…तस्बिर सहित
एजेन्सी, न्यूजिल्याण्डको साउथ समुद्र तटमा सयौ ह्‍वेलले आत्महत्या गरकेा छन्। समुद्र तटमा बच्च‍ासहित आएका सयौं ह्‍वेलले साउथ आइसल्याण्ड टापुमा आत्महत्या गरेको द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । धमाधम ह्‍वेलले आत्महत्या गर्न लागेपछि साना ह्‍वेललाइ बचाउने प्रयास स्थानीयवासीले गरिरहेका छन्। ठुलो संख्यामा ह्‍वेलले आत्महत्या गरेपछि विज्ञहरुले यसको अनुसनधान सुरु गरेका छन्। यसअघि सन् २०१५ को फेब्रुअरीमा....
बिना औषधि यसरी बढाउनुस् यौन क्षमता
एजेन्सी । तपाइलाई जानकारी छ वा छैन, यौन इच्छा बढाउनका लागि केही खानेकुरा पनि त्यतिकै शक्ति दिन्छ की जति भियग्राको एक गोलीले दिन्छ । कुन–कुन खानाले दिन्छ यौन शक्ति ? लसुनः हामीले भान्सामा सँधै प्रयोग गर्ने लहसुन यौन इच्छा बढाउँछ । लहसुनमा पाइने नाइट्रिक अक्साइड....
महिनावारी भएको बेलामा सम्भोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा अझै पनि केही भ्रम पाइन्छन् । महिनावारीका बेला सम्भोग गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा बलियो छ । पर सरेको बेला बार्ने या चोखोनितो गर्ने संस्कार भएको समाजमा महिनावारीको समयमा सेक्सलाई वर्जित नै गरिन्छ ।....
ट्रक चालकका लागि बजारमा नयाँ कन्डम
काठमाडौं, २८ कात्तिक — भारतको बजारमा अहिले डिप्पर नाम गरेको नयाँ कन्डम आएको छ । यो कन्डम विशेषगरी ट्रक चालकहरूका लागि बनाइएको हो । यो नाम भारतीय ट्रकहरूका पछाडि देखिने चेतावनीबाट लिइएको हो । ट्रकका पछाडि लेखिएको हुन्छ, ‘राति डिप्पर प्रयोग गर्नुहोला ।’ खासमा डिप्पर....
श्रीमानको वीर्य मेरो मुखमा झर्छ, म गर्भवती हुन्छु कि हुन्न ?
म आफ्नो बूढा (श्रीमान्) लाई अति माया गर्छु । त्यसैले म उनीसँग सेक्सका साथै सक पनि गर्छु । उनको वीर्य मेरो मुखमा झर्छ । भविष्यमा यसले कुनै रियाक्सन वा समस्या हुन्छ कि? अर्थात् म गर्भवती हुन्छु कि हुन्न ? यसले मेरो श्रीमानलाई कुनै असर गर्छ....
मासु खानेले च्याङ्ग्रा खोज्न जंगल जाँउ ,अधिकारकर्मीले छोड्ने भए जंगलमा ६ सय च्याङग्रा
भक्तपुर, असोज २० – दसैँको लागि मुस्ताङबाट ल्याइएको भेडा-च्याङ्ग्राको अभाव भएको छ । भक्तपुरमा झण्डै दुई हजार वटा भेडा–च्याङ्ग्रा बेच्न ल्याएकोमा पशु अधिकारकर्मीका नाममा एउटै समूहले ६ सय वटा च्याङग्रा किनेर लगेपछि अभाव भएको हो । हिजो बुधबार हेलम्बुको जंगलमा लगेर च्याङ्ग्रा छाडिदिने र अरुलाई....
कण्डमको साटो प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्दा के भयो ?
२०७३ भदौ ३१ गते सम्भोगका क्रममा गम्भीर चोट लागेसँगै एक भियतनामी जोडी राजधानी हनोइको अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । यौन सम्पर्क गर्दा यौनांगमा गम्भीर घाउ हुनुको कारण हो: उनीहरुको यौन सम्पर्क गर्दा कण्डमको रुपमा प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग गरेका थिए । यौन सम्पर्क गर्न निकै मन....
जसले ३३ जनाको बेवारिसे शव संकलन गरी दाहसंस्कार गरे
‘एक्सन फर सोसल चेन्ज’ नामक संस्थाले पाटन अस्पतालमा रहेका ५ वटा बेवारिसे शव संकलन गरी सोमबार दाहसंस्कार गरेको छ । पाटन अस्पतालमा बेवारिसे अवस्थामा रहेर गन्हाउन थालेका शवको दाहसंस्कार गरिएको संस्थाका अध्यक्ष विनय बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेतले तीन वर्ष पहिलेदेखि अस्पतालका रहेका ३३ वटा....
यदि तपाइँ नवविवाहित दम्पत्ति हुनुहुन्छ र हनिमुन मनाउनका लागि कतै जाने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाइँसामु सुनौलो अवसर छ । यो अवसर प्राप्त भयो भने तपाइँले सित्तैमा घुम्न त पाउनु नै हुन्छ १ करोड १२ लाख रुपैयाँ पनि पुरस्कार पाउनुहुनेछ । एक आलिशान होटेलले यस्तो अफर....